Zimbabwe – Daily World
, Mugabe, Politics, Reuters, Zimbabwe September 7, 2018, 2:44 pm Daily World 0 Comments
By MacDonald Dzirutwe HARARE, Sept 7 : Zimbabwe’s Robert Mugabe has said he now accepts President Emmerson Mnangagwa as the country’s legitimate leader after initially accusing him of leading a “disgraceful” de facto coup that ended his near four-decades rule last year. On the eve of the July 30 vote, Mugabe said he would vote […]
In Ireland Pope begs forgiveness for the ‘betrayal’ of Church abuse
, Politics, Reuters, Zimbabwe August 26, 2018, 7:02 pm Daily World 0 Comments
By Graham Fahy and Philip Pullella DUBLIN/KNOCK, Ireland, Aug 26 : Pope Francis on Sunday asked for forgiveness for the “scandal and betrayal” felt by victims of sexual exploitation by Catholic clergy as he toured Ireland where years of abuse scandals have shattered the Church’s former dominant role in society. On the first papal visit […]
, Breaking News, Election, Politics, Zimbabwe August 26, 2018, 6:28 pm Daily World 0 Comments
By MacDonald Dzirutwe HARARE, Aug 26 : Emmerson Mnangagwa urged Zimbabwe to unite behind his presidency on Sunday, as he took the oath of office following a divisive election that U.S. observers said had called the country’s democratic credentials into question. The Constitutional Court confirmed Mnangagwa as president on Friday, dismissing a challenge by the […]
, Breaking News, Politics, Zimbabwe August 26, 2018, 3:27 pmAugust 26, 2018 Daily World 0 Comments
By MacDonald Dzirutwe HARARE, Aug 26 : Emmerson Mnangagwa took the oath as Zimbabwe’s president in front of a stadium crowd on Sunday after a divisive election, as U.S. observers of that vote questioned the country’s democratic credentials. The Constitutional Court confirmed Mnangagwa as president in a ruling released on Friday, dismissing a challenge by […]
, Election, Reuters, Zimbabwe August 25, 2018, 12:50 am Daily World 0 Comments
By MacDonald Dzirutwe HARARE, Aug 24 : Zimbabwe’s Constitutional Court confirmed President Emmerson Mnangagwa’s disputed July 30 election victory on Friday, dismissing an opposition challenge that had held up his inauguration, which will now be held on Sunday. Before the vote, Mnangagwa had said a credible election could pull Zimbabwe out of its diplomatic isolation […]